FMBM : hisokatra ny lalao fifaninanana momba ny Baiboly | NewsMada
FMBM : hisokatra ny lalao fifaninanana momba ny Baiboly
Par Taratra sur 28/02/2017
Hanomboka rahampitso ary tsy hifarana raha tsy ny 30 jona izao ny lalao fifaninanana momba ny Baiboly izay karakarain’ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy (FMBM). Amin’ny alalan’ny “internet” no hahafahana miditra amin’ity lalao ity.
Natao izao mba hampahafantarana ny mpiray tanindrazana fa azo trandrahina ho fitaovam-panabeazana sy fampandrosoana ny “internet”. Entina hampivelatra ny sain’ny mpamaky Baiboly ihany koa ny lalao no sady ho fidiram-bola amin’ny fanorenana ny trano foibe vaovaon’ny FMBM. Kendrena ho azon’ny rehetra ny lalao ka nasina amin’ny teny malagasy, frantsay ary anglisy izany.
Tsiahivina fa anisan’ny fitaovana voalohany nentina nampianatra ny Malagasy hahay hamaky teny sy hanoratra teto amin’ny firenena ny Baiboly. Tsy azo ihodivirana intsony ny fivaran’ny teknolojia ka tsy maintsy miaina izany koa ny fampielezana ny Baiboly.